Le Burlat-Istudiyo esihlaziyiweyo eLyon-Tassin
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSoline
Ukuzola kwigadi yendlu yosapho lwethu, siye salungisa isakhiwo esihlonyelweyo saba zizitudiyo ezibini ezintle neziqaqambileyo. Uya kufumana zonke izinto ezithuthuzelayo: i-air conditioning, ikhitshi enezixhobo, i-WIFI ... Kwimozulu entle, ujabulele indawo yangaphandle. I-10 min ukuhamba ukusuka kumbindi weTassin (iivenkile, iposi ...) uya kuba kwindawo yokuhlala yezindlu zakudala ukusuka ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 ejikelezwe ziigadi ezinkulu. Umoya omncinci welizwe elinoxolo 15 imizuzu ukusuka kumbindi wesixeko saseLyon.
Safumana eli khaya likhulu lentsapho kwiminyaka emibini edluleyo. Isakhiwo oza kuhlala kuso yayiyiworkshop enemigangatho emibini engasebenziyo. Besinomdla wokuyihlaziya ngokupheleleyo kwaye siyenze ihlale inezitudiyo ezibini ukuze samkele usapho lwethu kunye neendwendwe ezivela kuzo zonke iinkalo zobomi. Besifuna ukudala indawo ezolileyo, efudumeleyo necocekileyo ukuze sikufumane. Sikholelwa ukuba siphumelele. Yiza usibone kwaye usixelele!
I-rue des cerisiers yindawo ethule kakhulu. Uya kufumana indawo yezindlu zakudala ukusuka ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 ejikelezwe ziigadi ezinkulu. Umoya omncinci welizwe elinoxolo imizuzu eli-15 ukusuka kumbindi wesixeko saseLyon.
Umbuki zindwendwe ngu- Soline
Ngexesha lokuhlala kwakho, sihlala sisesandleni sakho ngayo nayiphi na imibuzo emalunga nokuhlala kwakho kunye nombutho wayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tassin-la-Demi-Lune